A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke faili faịlụ enweghị usoro IPFS 0.5 | Site na Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke faili faịlụ IPFS 0.5ral decentralized
Naanị webatara mbipute ọhụrụ nke usoro faịlụ ekwesighi IPFS 0.5 (InterPlanetary File System) nke na-etolite ụdị faịlụ zuru ụwa ọnụ nke etinyere n'ụdị netwọk P2P.
Akụkụ bụ isi nke IPFS bụ ikwu okwu ọdịnaya, nke njikọ iji nweta faịlụ metụtara ya na ọdịnaya (gụnyere crypto hash nke ọdịnaya) yana IPFS nwekwara nkwado ụdị arụpụtara.
Adreesị faịlụ a enweghị ike ịnyegharị aha ya, sNwere ike ịgbanwe naanị mgbe ị gbanwere ọdịnaya. N'otu aka ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịme mgbanwe na faịlụ ahụ na-enweghị ịgbanwe adreesị (ụdị ochie ahụ ga-anọgide na adreesị ochie ahụ ma nke ọhụrụ ga-adị site na adreesị dị iche, ebe ọ bụ na ngbanye nke ọdịnaya faịlụ ahụ ga-agbanwe).
Kedu ihe dị ọhụrụ na IPFS 0.5?
Na ọhụrụ version arụmọrụ na arụmọrụ dịwanye mma, dị ka e gosipụtara na netwọk ọha na eze dabere na IPFS nke karịrị 100,000 node na mgbanwe na IPFS 0.5 gosipụtara mmegharị nke usoro nkwekọrịta iji rụọ ọrụ n'ọnọdụ ndị dị otú a.
Na njikarịcha lekwasịrị anya tumadi na melite usoro ntụgharị ọdịnaya maka nyocha data, mgbasa ozi na weghachite, yana ịkwalite arụmọrụ nke mmejuputa tebụl hash a kesara (DHT), nke na-enye ozi gbasara ọnụ ndị nwere data achọrọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ koodu DHT metụtara, nke mere ka nyocha ọdịnaya na arụmọrụ ndekọ IPNS dị oke mkpa.
Karịsịa ọsọ nke tinye data arụmọrụ abawanyela ugboro 2, ọkwa nke ọdịnaya ọhụrụ na netwọkụ na oge 2.5, mmịpụta data 2 ruo ugboro 5 na ọdịnaya ọdịnaya 2 ruo 6 ugboro.
Ntugharị mgbasa ozi mgbasa ozi na nnyefe ụzọ nyeere ọsọ ọsọ 2-3x ọsọ ọsọ site na iji arụmọrụ bandwidth na mbufe mbufe na-aga nke ọma. Na mbipụta na-esote, a na-ezube iwebata ụgbọ njem dabere na usoro QUIC, nke ga-enweta nnukwu uru nrụpụta ka ukwuu n'ihi igbu oge.
Ọrụ na ntụkwasị obi nke IPNS usoro emeela ngwa ngwa (Interplanetary Naming System), ejiri mepụta permalinks nwere agbanwe agbanwe ọdịnaya. Ọhụrụ ibuo iga nke pubsub mere ka o kwe omume mee ngwangwa nnyefe nke ihe ndekọ IPNS site n'oge 30-40 mgbe ị na-anwale na netwọk nwere puku ọnụ (a na-emepụta simulator network P2P pụrụ iche maka nyocha).
Layer arụmọrụ Badger na-emekọ ihe na FS OS na-oyiri na nkwado maka asynchronous na-ede, Badger dị ugbu a ugboro 25 karịa ngwa ngwa ọkwa ochie. Nrụ ọrụ arụmọrụ metụtakwara usoro Bitswap, nke ejiri iji nyefee faịlụ n'etiti ọnụ.
Site na ndozi arụmọrụ:
A na-eji TLS ezoro njikọ dị n'etiti ndị ahịa na sava.
Nkwado subdomain apụtawo na ọnụ ụzọ HTTP: ndị mmepe nwere ike itinye ngwa ngwa (dapps) na ọdịnaya weebụ na subdomains dịpụrụ adịpụ nke enwere ike iji adresị hash, IPNS, DNSLink, ENS, wdg.
Agbakwunyere oghere aha / p2p ọhụrụ nke wepụtara data metụtara adreesị ndị ọgbọ
Agbakwunyere nkwado ndabere.
IPto-Dabara Protocol Labs na-akwado usoro protocol na-emepe emepe FileCoin, nke bụ nkwụnye maka IPFS. Ma IPFS na-enye ndị sonyere ohere ịchekwa, rịọ ma nyefee data n'etiti ha
A na-etolite Filecoin dị ka ikpo okwu dabere na teknụzụ blockchain maka nchekwa na-adịgide adịgide
Filecoin na-enye ndị ọrụ nwere ohere diski ejibeghi ohere iji nye netwọkụ ha ego, yana ndị ọrụ chọrọ nchekwa iji zụta ya. Ọ bụrụ na mkpa maka ebe fuo, onye ọrụ nwere ike ree ya. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta ahịa maka ebe nchekwa, nke a na-eme atụmatụ ya na akara ngosi Filecoin guzobere site na ntinye.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata karịa banyere faịlụ faịlụ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ ya nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke faili faịlụ IPFS 0.5ral decentralized
QEMU 5.0 dị ebe a na ndị a bụ mgbanwe ya kachasị mkpa